Sheekada Xumbadu waa madal aad ka abuuri karto goobooyin biyo ah | Androidsis
Sheekada Xumbadu waa madal cusub oo ku timaadda Android iyada oo dhammaanteed sida caadiga ah aan ka raadinno ciyaaraha qaabkan. Xitaa waxay awood u leedahay inay ku darsato hadhuudhkeeda ciid si aad uhesho ciyaar ka duwan taas oo ay ugu mahadcelinayaan kuwa goobooyin biyo ah oo dabeecadaada xiisaha leh ay awoodi karto inay curiso
Oo markaa waxaan aadi doonnaa meelahaas aadka u adag ee ku yaal barxaddan oo kharribmay in lagu muujiyo farshaxanka weyn ee pixel. Runta sidoo kale Naqshadeynta heerarkeeda ayaa siman, marka waa inaan layaabno cinwaan cusub oo aanaan ogayn ilaa aan isku dayno. U tag.
1 Biyo goobooyin si loo gaaro meel kasta
2 Marinnada qarsoodiga ah iyo 3 adduunyo qurux badan oo ku jira Sheekada Xumbada
3 Boodboodka qaarkood oo ay tahay inaan daryeelo
Biyo goobooyin si loo gaaro meel kasta
Sheekada Xumbadu waa madal cusub oo aad ku qasbanaan doonto ka caawi halyeeyada inay gaarto meelahaas aan macquul ahayn. Waxaan leenahay badhanka boodboodka iyo mid kale si loo abuuro goobooyin biyo ah oo aan u isticmaali doono dabeecadeena si aan uga dul boodno oo aan u gaarno meelahaas aan macquul ahayn.
Mishiinka biyaha ayaa joogi doona dhowr ilbidhiqsi ayaa sabaynaysa ilaa ay qarxayso, sidaa darteed waa inaan deg degno si aan ugu dul boodno oo aan si caqli leh u adeegsanno. Akhlaaqdani waa mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee Sheekada Xumbada, maaddaama ay soo jeedinayso in aanaan ka tagin meel kasta oo la sahaminayo iyo in masaafada fog la gaari karo haddii aan isticmaalno xumbada biyaha ee loo baahan yahay.
Waxaas oo dhan ayaa ina hoggaaminaya ka hor gameplay qabatimo iyo in qabatooyin ka daqiiqadii ugu horeysay. Kaliya maahan wanaaggaas, laakiin maxaa yeelay heerarku waa la dareemi karaa in loogu talagalay gacantooda si ay ugu baahan yihiin inay isticmaalaan goobooyin biyo ah meelaha noo oggolaanaya inaan sii wadno xiisaha.
Marinnada qarsoodiga ah iyo 3 adduunyo qurux badan oo ku jira Sheekada Xumbada
Oo sidaas Bubble Tale waxaa loo soo bandhigay sidii a dhufto ee dhufto ee aan ku leeyihiin 3 adduun si loo baadho loona dhammaystiroSida 30 heer ay sugayaan inaan dhammeyno. Baadhitaanka heerarkaas 30 iyo 3 adduunyo, waxaan heli doonnaa madaxdii ugu dambaysay iyo suurtagalnimada helitaanka meelo qarsoon.
Sidoo kale isku day inaadan ka bixin aag la sahamiyo, maadaama hubaal sirtaas qarsoon taasi ay tahay waxay na siin doontaa abaalmarinno heerar kasta leh. Waxa kale oo muhiim ah in si fiican loo boodo boodboodka oo laga faa'iideysto goobooyin biyo ah si looga takhaluso cadawga.
Iyo in jidka, waxaa jira aad u kala duwan oo si caqli leh ayaa loo dhigaa sidaa darteed waa inaan dib ugu noqonaa sidii aan markale ciyaarta u bilaabi lahayn. Muusiggu sidoo kale waa adag yahay in la dhigo qodobka lagama maarmaanka u ah soo saarista khibrad madal ay kuwa kale jeclaan lahaayeen inta badan.
Boodboodka qaarkood oo ay tahay inaan daryeelo
Taasi waa, waxaan ka hadleynaa barxad sida Mario oo kale og Ku boodboodka xirfadda leh ayaa ugu muhimsan si si sax ah loogu socdo. Haddii kale, waxaan garaaci karnaa darbiga iskudayey inaan ka gudubno heerkaas. Waana inaad ka fikirtaa haddii ay jiraan oo keliya 30 heer, waxaa loogu talagalay qaab aan iyagu fududayn haba yaraatee. Tani waxay sidoo kale ka caawineysaa dhibaatada qallooca inay kordho waxaanan isku aragnaa inaan isku dayeyno inaan dhammeyno kulankaan oo loo yaqaan Qisada Sheekada.
In yar ka hor in aanaan u dhowaan sameynta meherado sida Sheekada Xumbada, in kasta oo kani leeyahay wax u gaar ah oo lagu raaxaysto. Muuqaal ahaan waa guul laga gaadhay farshaxanka 'pixel art' wuxuuna kaaga tagi doonaa hadal la'aan sida wanaagsan ee jilayaasha loo qaabeeyey iyo deegaannada leh heerar aad u ballaaran. Tan sidoo kale waa la mahadiyey markay ku jirto dhuftoyin kale oo badan markaynu bilowno heerka aynu dhammaynayno.
Sheekada Xumbo waa daryeel madal taas oo aad ku raaxeysaneysid waqti fiican soo saarista goobooyinkan biyaha si aad u isticmaasho oo aad sidaas ugu sii booddid. In heerarka loogu talagalay gacanta ayaa naga caawinaysa inaan sii wadno ciyaarista, marka laga reebo astaamahaas aan furi karno si aan ugu dhiirrigelino inaan furno wax walba oo ciyaartan ah. Waxay leedahay lacag bixin yar ciyaarta dhexdeeda ah, laakiin haddii kale waxaad bilaash ku haysataa inaad horjoogto wax ka badan dhuftooyinka wax lagu dhufto.
Naqshad muuqaal weyn
Heerarka gacanta lagu qaabeeyey
Ma xuma in la awoodo in la habeeyo meesha ay ku yaalliin burooyinka kontoroolka
Sheekada Xumbada - Bunny Quest
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Sheekada Xumantu waa madal aad u wanaagsan oo loo isticmaali karo goobooyin biyo si ay u gaaraan meel kasta
Waxaa jira dhowr ciyaarood oo adeegsada qaab isku mid ah si ay u abuuraan heerarka, ma ogtahay dalabka ay u adeegsadaan sameynta cayaarahan?
PS Haddii aad ikhtiyaar u leedahay inaad dhaqaajiso kontaroolada, inkasta oo ay tahay inaad weli dulqaad badan yeelato markii aad boodayso ...